Ndi Nigerian Crypto Startup AFEN Group Na Ewelite $ 1million Na Token Sales Round
AFEN Otu, NFT nke gọọmentị na-akwado nke mbụ mere n'oge na-adịbeghị anya nwere otu n'ime ọhaneze kachasị ngwa ngwa na oghere cryptocurrency ebe ọ bulitere ihe karịrị otu nde dollar n'oge akara ngosi ahịa.
Amalitere ya na onye isi ụlọ ọrụ ya dị afọ iri abụọ na asaa na onye ọlụlụ, Deborah Ojengbede, AFEN bu isi okwu maka mmekorita nke mmekorita nke Afrika na itinye uche na ego di omimi, nka, ala na ulo akwukwo.
Ebe ọ bụ na cryptocurrency na ngọngọ- teknụzụ na-ebugharị ya- na-aga n'ihu na-etinyekwu uche karịa mgbe ọ bụla ọzọ, ọ bụghị ebe a ga-ahụ ụmụ nwanyị Africa ka ha na-arụ ọrụ kachasị na ngalaba ahụ, na-agbasawanye ngọngọ na mmetụta ya na agụmakwụkwọ, ahụike na azụmaahịa, naanị ikwu banyere ole na ole.
Maka Deborah, onye bụbu onye ọchụnta ego na Union Bank, ahụmịhe ya yana ọchịchọ ịchọpụta ụwa nke crypto nyeere ya aka iwulite ụlọ ọrụ ga-enye ndị ahịa ya ọrụ mgbanwe.
Ohere inweta ohere site na igbochi ya
N'okpuru iduzi Deborah, AFEN na-achọ ijikọ usoro data na-agaghị agbanwe agbanwe na nkwado nke ndị gọọmentị iji nye ndị ahịa ngwaahịa ha.
Ihe mbido nke Naijiria bu ebumnuche iji kuziere ma kpughee otutu mmadu ka ha tinye crypto ma kwado oru na teknụzụ Blockchain. Iji mezuo nke a, ụlọ ọrụ ahụ nwere olile anya ịdebanye aha ndị ọhụrụ na mmalite ịmalite ọzụzụ na mpaghara ha nwere mmasị.
Emebere ya n'okporo uzo iji gbanwee ulo oru ala na ulo site na inyocha ulo nke ndi mmadu na ime ka ahia ndi ozo rue na Blockchain, na-ebelata onu ahia nke inweta ihe ma mee ka odi mfe inye ala mgbe onwu gasiri.
Dabere na ụzọ ụzọ ya, AFEN Group na-ezube ịmalite nyocha beta ngwaahịa na mgbe emesịa na Mee yana wepụta akara mbụ nke NFT ahịa n'otu ọnwa.
Ihe oyiyi gosiri: Deborah Ojengbede, Onye isi, AFEN Otu